Dzidza Maitiro Ekuwedzera Mari NeKusunga Iyo Inotyisa Simba reYako Tiny Tsvaga Bhokisi | Martech Zone
Kutsvaga ndiyo mutauro wepasirese. Uye bhokisi rekutsvaga ndiro portal kune yako ese mhinduro. Kumba uchirota pamusoro pesofa nyowani yeimba yako? Google magoneti ekurara akanakisa edzimba diki. Kubasa kuyedza kubatsira mutengi kunzwisisa kwavo kunyorera sarudzo? Tsvaga yako intranet kune yakanyanya-kusvika-nguva mitengo uye ruzivo rwekugovana navo.
Pakukwirira kwekuita, tsvaga uye utarise zvinowedzera kumusoro uye pasi mutsara. Vatengi vanotenga zvakawanda uye vanoramba vakavimbika, uye vashandi vanogadzira uye vanoramba vachiita basa kana vachigona kuwana izvo zvavari kutsvaga, uye kuwana kurudziro yakasarudzika.
Kubva pane yedhijitari yezvokutengeserana ruzivo kune yepasirese nzvimbo yedhijitari yebasa, Lucidworks inobatsira makambani kuvaka yakasimba kutsva uye dhata yekutsvaga mhinduro kufadza vashandisi uye kuwedzera kukosha kwedata iripo.
Kutsvaga inzira inopfuura kungori bhokisi. Iyo inogona kugadzira kana kutyora iro rese dhijitari chiitiko.
Heano mashoma mienzaniso yekuti sei Fusion, Lucidworks AI-powered search platform, inobatsira mutengesi wepasi rose kukura mari, bhangi repamusoro kuvaka hukama hwakadzama hwevatengi, kambani hombe yepasi rose yemafuta uye gasi inopa masimba sarudzo-dzakatsigirwa, uye dhatabhesi rekurapa rinotsigira kukurumidza kuongororwa uye kurapwa.
Sei Lenovo Akafambisa Kutsvaga Kuvhura Sosi kune Boost Shanduko uye Kukosha
Apo Global Search Inotungamira Marc Desormeau akatora iyo yekutsvaga timu yeLenovo.com, akasangana nemubvunzo:
Nei kutsvaga kusiri kugadzirisa zvakanyanya sekuda kwedu?
Ichitsvaga kutsiva yayo FAST-yakavakirwa yekutsvaga mhinduro neplatifomu inogona kutsigira izere dhijitari shanduko, Lenovo yakashandura kuna Gartner naForrester kuti vawedzere mikana. Lucidworks Fusion yakakurudzirwa. Fusion yakavhurika-sosi tekinoroji inosanganisira kunze-kwe-iyo-bhokisi zvishandiso zvinobvumidza kuchinjika uye kugadzirisa kuitira kuti mitsva yekutsvaga igadziriswe yakanangana kune chigadzirwa chigadzirwa, nzvimbo, mutauro, mushandisi, nezvimwe. Izvi zvakakosha kune yepasi rose mhando senge Lenovo ine zvigadzirwa zvinogadzira B2C, SMB, uye B2B mabhizinesi uye zvinoshandira vatengi mumisika ye180 vachitaura pamusoro pemitauro makumi matanhatu.
Vanhu vari kutanga kunzwisisa kuti pane imwe chaiyo data pano yakakosha uye isu tinogona kushandisa izvo kuratidza vatengi vedu neruzivo rwuri nani.
Marc Desourmeau, Global Tsvaga Mutungamiri, Lenovo
Mushure mekushandisa Fusion, Lenovo akaona mari yemari yegore negore kuburikidza nekutsvaga kwekuwedzera ne95%. Pane saiti yekutsigira yeLenovo yevatengi, kudzvanya pamitengo uye mabhureji emitengo kwakaratidza kunatsiridzwa, zvichiratidza kuti vatengi vari kukurumidza kuwana izvo zvavari kutsvaga. Zvakare, nekubatanidza mushandisi zviratidzo-Kusanganisira tinya, wedzera kungoro uye kutenga- nemuchina wekudzidza, timu yekutsvaga yakwanisa kushandura yekutsvaga mhedzisiro chinzvimbo chehuwandu hwakawanda hwedata mune yavo zivo yebase. Kukosheswa, kuyerwa nekuti kangani vatengi vanodzvanya pamhedzisiro yekutanga vachipesana nechero mhedzisiro, kwave nani neanopfuura makumi mashanu neshanu muzana muzana mukati memwedzi mishoma kubva vatangisa masaini eFusion.
Vashandi paTop Bank Vanoshandisa Zvakasarudzika Zvinokurudzirwa Kuti Uwedzere Vatengi 'Hupenyu Hwekukosha
Rimwe remabhangi epamusoro eUS anga achinetseka kubatsira varairidzi vavo vezvemari kuti vakurumidze kuona zvakagadzirirwa, mazano akakodzera uye zvigadzirwa zvevatengi. Iri bhangi raive nezvidimbu zvinopfuura mazana maviri nemakumi mashanu zvezvikamu zvekutsvaga kwekutsvaga zvakaburitswa uye zvakaiswa zuva nezuva kuhurongwa, asi vanachipangamazano vazhinji vane nguva yekuzviziva nemagwaro gumi nemashanu chete. Izvo zvaive zvisingaite kusefa pakati pezvinhu zvese, kuzviisa muchirevo, uye kuona kuti ndeipi yainyanyo kukodzera kune yega yega yevatengi vavo zviuru zviviri. Iyo nguva yakatora kuzivisa mhinduro yaireva kushomeka kwekuita uye mikana yakarasika yekubatana nevatengi.
Kutsvaga kuri pakati pekufambisa kwemubatsiri wezvemari uye kunoshandiswa kuchinjira kune kumwe kudyara, kutengesa, kana kufambiswa kwebasa.
Lucidworks aiziva kuti vanachipangamazano vaifanirwa kukurumidza kuvhura kuwirirana pakati pezvinodiwa nevatengi uye maitiro ehunhu. NeFusion, kambani iyi yakakwanisa kuburitsa yakatarwa yekutanga runyorwa rweanogona kuita nzwisiso uye analytics kuvabatsira kuti vakurumidze kuziva iyo Inotevera Yakanakisa Chiito kune mumwe nemumwe mutengi. Vanachipangamazano vezvemari zvino vanogona kukoshesa izvo vatengi zvavanofanira kutenga kana kutengesa imwe mari yekudyara inoenderana nemaitiro uye mapatani mumaakaundi, ichipa iyo "iwe-unondiziva" mhando yeruzivo vatengi vanotarisira. "Inotevera Nhanho Nhanho" inogadzirisa kutora nguva-inotora danho uye inovandudza mashandiro evapi vemazano saka ivo vanotengesa zvakanangwa vatengi vatengi munguva shoma. Zvese izvi zvakakonzera hukama hwakadzama nevatengi uye kuwedzera mari.
Dhawunorodha Yemahara Ebook: Chinja iro reMari Advisor Ruzivo neAI
Oiri neGesi Giant Inoburitsa Insights kubva pamakore zana nemakumi mashanu emadhora Akakosha
Imwe yemakambani makuru epasi rose emafuta uye gasi aive neruzivo rwakadzokera kumashure makore zana nemakumi mashanu rwakapararira papepa, dhatabhesi, kunyorera, maemail, madhiraivho uye akagovaniswa, kutenderera nyika. Nekuti vashandi havana kuwana dhata ravaida, vakatanga kuchikoromora kure, vachipedzisira vachikura iyo zivo kusvika kumagwaro emamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu. Kuwana yakanyanya kusvika parizvino, chaiyo vhezheni kune ese makumi maviri neshanu maturusi iyo kambani yakanga yatumira yaive yakaoma. Imwe dhata yakanga isina kunyoreswa uye mamwe masosi aive akapfuura terabyte hombe, iyo yakanyanya kuomarara kunongedza. Kunyangwe iwo maturusi paakadzoka nemhedzisiro, vanhu havana kuvimba nemhedzisiro- uye kana ukatadza kuwana zvauri kutsvaga, iyo data haina basa.
Lucidworks akapinda aine basa rekugadzira chiitiko chinogombedzera che data nekushandisa analytics kubatanidza ruzivo silos, gadzira iyo agile katalog yemamiriro uye kukosha, uye kugonesa vashandisi kuburitsa rakakodzera bhizinesi ruzivo kune ese enhoroondo dhatabhesi. Fusion yakakwanisa kuongorora mamirioni ezvinyorwa kuburikidza kushandiswa kwemitauro yechisikigo (NLP) muChirungu, ChiFrench, ChiGerman, ChiRussian, inogonesa kudzokororwa kweruzivo munzvimbo dzese dhata, uye gonesa kuwanikwa kweruzivo rutsva kuburikidza nezvinokonzeresa zvichibva pane zvido zvakachengetedzwa nevashandisi. Nekutumirwa, zvikwata zvekutsvagisa zvinokwanisa kuwedzera hupfumi hwedata riri kugadzirwa, uye nekukurumidza kutora ruzivo rwakakwana pavanoruda, izvo zvinopedzisira zvaendesa mukuita sarudzo kwakanaka uye kuchengetedza mari.
AI-Powered Research Portal Inobatsira Vanachiremba Kuongorora uye Kuchengeta Varwere
AllMedx kufungidzirwa Google yevanachiremba. Ivo vaiziva kuti vanachiremba vakashungurudzika neyakajairika injini dzekutsvaga senge Google neBing nekuti mhedzisiro yaiwanzosanganiswa nezvisina kuvimbika zvemukati zvaiitirwa vatengi nevarwere. AllMedx vakafunga kuti varapi uye vamwe vashandi vezvehutano vanogona kubatsirwa nechishandiso chekutsvaga chakaburitsa zvirimo chete kubva kune MD-yakaongororwa zvinyorwa, makuru-ekurapa majenali ezvekurapa, uye zvimwe zvakasarudzika, zvinoremekedzwa zvemakiriniki. Chinangwa chaive chekubvisa zvisina basa, mutengi-mhando zvidimbu izvo zvingave zvidiki-kune-zvisina kukosha kune varapi vachitsvaga mhinduro kumakiriniki, poindi-ye-hanya mibvunzo.
Mushure mekunge AllMedx yavaka yakakwenenzverwa -komboni zvinoenderana nehunyanzvi hwekurapa-zvemukati hunyanzvi, vaida kuti zvive nyore kutsvaga. Uchishandisa Fusion's ML algorithms, mhedzisiro yekutsvaga inogadzirirwa kune wega mushandisi. Kuedzwa kwevashandisi kunotendera AllMedx kugadzirisa zvakanaka mapaipi emubvunzo uye gadziridza ruzivo rwevashandisi. NeFusion, AllMedx inogona kutsigira nechivimbo vashandisi vayo vechiremba nekupa mukana kune anopfuura mamirioni gumi nemaviri magwaro akaongororwa kuburikidza neAI-powered search. Zvichienderana nemhinduro yemushandisi wechiremba, timu yeAllMedx ine chivimbo chekuti saiti ichawedzera kuwana kune yakakosha, kiriniki poindi-ye-hanya ruzivo rwunobatsira kuvandudza kutarisirwa kwevarwere.
Dzidza zvakawanda nezvekuti AI iri kushandura sei mushonga kuti uve nani
Tsvaga Izvo AI-Powered Dhijitari Shanduko Inoreva Kwauri
Iyo yepamusoro yezviitiko zvemadhijitari pane ese mawere ndeyekusarudzika, kana kugona kufungidzira chinangwa chemushandisi wega wega. Apa ndipo paunopedzisira wasiya zviuru zvemitemo yakachengetedzwa nemaoko uye pachinzvimbo unowedzera kwete chete fungidziro analytics, asi machine learning, zviratidzo, uye kugadzirisa mutauro mutauro. Pamwe chete, ese matekinoroji aya anopa simba kutsvaga kwako kuve kwakanyanya kudarika bhokisi diki mukona yechiso.
Uye bhokisi rekutsvaga harisi iro rega chikamu cheiyo dhijitari ruzivo rwakagadzirira shanduko-yakangwara sei chatbot yako? Imwe yekukosha uye kwepasirose kugadzirisa iwe yaungaitise kune rako bhizinesi ndeye kutanga smart smart chatbot mhinduro. Lucidworks Mhinduro Dzakanaka iri chatbot inosimudzira iyo inoshanda ese e kugadzirisa mutauro mutauro, machine learning, uye zviratidzo kuunganidza inherent muFusion kune iyo chatbot chiitiko. Zvirinani kuzvishandira ne smart chatbot inopa vashandisi nekukurumidza sevhisi uye inosunungura kumusoro rutsigiro uye vamiririri yedhesiki kutarisa pazviitiko zvakaoma, zvekunze. Vatengi vanogutsikana uye vashandi vari kuita zvakanyanya nebasa ravo.
Kunyangwe iri isina chinhu yekutsvaga bhokisi kana akangwara chaiwo mubatsiri, Lucidworks Fusion inopa bhizinesi-giredhi kugona kugadzira, kukudziridza, uye kuendesa zvine hungwaru zvekutsvaga kwekutsvaga chero chiyero, uye yave ichizivikanwa nekutungamira yakazvimirira tekinoroji yekutsvagisa uye yemazano mafemu Forrester neGartner. Makambani kudunhu reGlobal 2000 anovimba neLucidworks mazuva ese kupa simba avo-anotarisana nevatengi uye ekutsvagisa mabhizinesi. Unofarira kuziva kuti ungawana sei zvimwe kubva mukutsvaga kwako?
Bata Lucidworks Nhasi
Tags: ai-powered kutsvagaallmedxrwezvemabhengichatbotruzivo rwe datashanduko yedhijitariforresterkutsvaga kwemukatiLenovokukosha kwehupenyu hweselucidworkLucidworks fusionmachine learningkugadzirisa mutauro mutaurochinotevera chiito chakanakisanlpzviratidzomhinduro dzakanakatsigirakutsvaga kudikivirtual mubatsiri
Crunchbase Bhizinesi reSalesforce: Ziva, Tumira, uye Gadzirisa B2B Prospect Dhata